Neimar sy i Bruno Marchesini, malalany dia "nandrehitra" ny setroka
Latsaky ny iray volana sisa tavela amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany, saingy ny fanatanjahantena dia tsy natao ho an'ny lahy ihany! Mpilalao mahafatifaty miandry ireo mpankafy marobe izay noana noho ny vaovao mafàna sy mahatsikaiky.
Ny mpilalao baolina kitra nasionalin'ny baolina kitra Breziliana ary iray amin'ireo atleta be mpividy indrindra eto amin'izao tontolo izao, nanaiky handray anjara amin'ny sarimihetsika matevina amin'ny dokam-barotra ambanin'ny akanjo i Neimar. Ny tolotra dia nifanaraka tamin'ny fankalazana ny Andron'ny Mpifankatia rehetra! Heverinao ve fa toy ny typo io? Tsia, tsy misy hadisoana, nankalazaina ny fetibe tao Brezila tamin'ny 12 Jona.
Arahaba, tena mafana tokoa!
Manararaotra ny fisainana bebe kokoa amin'ny toetran'ireo atleta sy ny fampidirana manontolo ao amin'ny tontolon'ny modely sy ny orinasan'ny sarimihetsika, nanapa-kevitra ny hiarahaba ny mpankafy azy amin'ny fety tsy mahazatra ny marika C & A, ary nanasa an'i Neimar. Nanapa-kevitra ny mpaka sary ny sehatra dokambarotra vaovao hanangom-bokatra sy ny afo, ka niaraka tamin'ny baolina kitra no nanamarika an'i Bruno Markesini, modely sy mpilalao sarimihetsika. Nafana be ny lahatsary, raha ny marina, tahaka ny mpivady ihany!
Neimar sy Bruno Marchesini malalany
Neimar sy Bruna Marchesini
Tsy ela ny fampakaram-bady?
Nanomboka nihaona tamin'ny 2012 ny mpivady, fa ny asa soa sy ny fifantohan-tsaina avy amin'ireo mpankafy sy mpankafy, dia nitondra an'i Neimar sy Bruno Markesini nandritra ny roa taona. Tamin'ny taona 2016, ireo tanora dia tafaraka indray ary nanambara fifamatorana. Rahoviana no ilay fampakaram-bady? Ireo mpanao gazety Breziliana mpanao gazety Folha de Pernambuco dia nanambara fa ny lanonana dia hatao amin'ity fahavaratra ity ao amin'ny nosy Fernando de Noronha.
Mpivady manamboatra fampakaram-bady amin'ity fahavaratra ity
Manolotra sariaka mafana avy amin'ny marika C & A sy malala izahay:
Ny resadresaka noraisin'i Diana Cox momba ny fitiavana voalohany an'i Tom Cruise
Notsongan'i John Carney: "Keira Knightley - tsy mba mpilalao sarimihetsika izay mahafinaritra azy ny miasa!"
Ahoana no niatrehan'i Harrison Ford ny loza roa?
Nampangaina ho nangalatra i Sarah Jessica Parker!
Bella Hadid dia nanao fanadihadiana lalina momba an'i Gigi anabaviny, ny fialam-boly tiany sy ny asany modely
Ahoana no tokony hisotroana ilay geyner?
Mamy ho an'ny hemorrhoids amin'ny kôdeksa
Voly vary varimbazaha
Sakafom-boankazo ao anaty lafaoro - sakafo tsotra ho an'ny sakafo maivana isan'andro sy ho an'ny tsirony rehetra!
Tiamat - ny fampisehoana ny korontana eran-tany
Ahoana ny fametrahana linoleoma?
Loto feno vatana
Lamb miaraka amin'ny legioma
Begonia - maniry plumbing
Inona no tokony hataon'ny fampakaram-bady?
Ankizy ririnina ho an'ny zazalahy